Nagu saabsan | Linqing Meifule qiray Bearing Co., Ltd.
Linqing Meifule qiray Bearing Co., Ltd.
Guantao sharaf ku sita soo saarista co., Ltd.
(QIIMAYNTA QIIMEYNTA QIIMEYNTA LEIFULE CO., LTD) waxaa la aasaasay 2005, waxayna si gaar ah u soo saartaa goos goos goos goos ah oo qoto dheer, barkin barkin iyo saa'idka rullaluistemadka. Sidoo kale waad sameyn kartaa saa'ido gaar ah sida ku cad sawirka iibsadaha ama muunad. Warshadda hadda waxay ku taal aagga warshadaha dhalista ee. Aagga warshadaha oo dhan wuxuu daboolayaa 80000 mitir murabac oo wuxuu leeyahay silsilad wax soo saar oo dhammaystiran, taas oo badbaadin karta qiimaha wax soo saarka isla markaana ka caawin kara waxqabadka habboon.
Warshadu waxay bilawday inay si toos ah wax u dhoofiso laga bilaabo sanadkii 2015 waxayna dhistay shirkada dhoofinta (XIAMEN PRIDE BEARINGS CO., LTD) si ay u sameyso adeega ugu fiican iibka. Kooxda iibku waxay ku leeyihiin shaqaale khibrad leh iyo xeerar dhaqameed wanaagsan magaalada Xiamen. Ka dibna samee silsilad kaamil ah wax soo saarka, iibinta iyo tallaabada iibka kadib.
Iyada oo ku saleysan farsamada wax soo saarka iyo waayo-aragnimada samaynta godadka kubbada jeexdin ee qoto dheer, warshadu waxay bilaabeysaa inay soo saarto barkin barkin 2010. Laga soo bilaabo birta ceyriinka ah iyo walxaha birta ah ilaa guryaha la tuuray iyo jihada dhammaatay, waxaan xukuminay wax soo saar adag iyo geeddi-socodka kormeerka illaa lagu hayo bakhaarka shixnad. Markaa hubi inaad ku qanacsan tahay orodka si aad u dhammeysato isticmaalaha Dhamaan shaqsiyadeena iibiyayaashu waa inay lahaadaan aqoon xirfadeed oo ku saabsan jihada iyo farsamada, ka dib waxay talo bixin wanaagsan siin kartaa iibsadaha isla markaana qiimaha ugu hooseeya ugu hooseeya.
Alaabtayadu badanaa sida hoos ku xusan
Waxaan ku qadarinay dhamaan waaya aragnimada iyo hormarka markasta sanadahan waxaan hada noqonay kuwa xirfad leh xaga xariiqda.
1. Qaybaha saa'idka UC, UK, SA, SB, ee 200 iyo 300 taxane ah
2. Tuur guryaha birta ah ee P, F, FL, T, FA, FB, FC, HA iyo wixii la mid ah
3. Dhalista kubbadda jeexdin ee qoto dheer (cabbir yar iyo cabbirka dhexe) oo ah inji ama mitir
4. Taabta wax lagu rito oo ku dhagan inch iyo metrik taxane ah (tayada ka sareysa heerka P0 - P6)
Iyada oo ku saleysan kalsoonida iyo sharafta, ilaalinta tayada marka hore waa siyaasadeena ganacsiga.
Waxaan ku ilaalin doonnaa oo aan ku ballaarin doonnaa suuqdeena tayada ugu fiican, qiimaha iyo adeegga ugu fiican. Waxaan jeclaan lahayn inaan cinwaankeena sii badino oo aan aad iyo aad ugu sii kordhno meelaha wax lagu barto.
Si kal iyo laab ah u soo dhawow dhammaan iibiyeyaasha qaaliga ah ee ilaaliya wadashaqeynta aaminka ah.